Waa Kuwee Ciyaartoyda Ka Tagaya Kooxda Chelsea Isla Markaana Uu Dhacaayo Heshiiskoodu? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Kooxda Chelsea waxay rajaynaysaa inay adkaysato booskeeda kaalinta afraad oo ay gaashaanka u dhigato Manchester United oo ay saddex dhibcood ka sarrayso, laakiin halis weyn ku haysa.
Marka laga soo laabto xayiraadda uu keenay xanuunka Coronavirus, waxa Chelsea ay ku hirdami doontaa tartanka FA Cup oo ay wareeggiisa siddeeda u gudbi doonto, laakiin fursad badan uma haysato inay ka adkaato Bayern Munich oo ay ugu tegi doonto Germany iyadoo lugtii hore ee Stamford Bridge ka qabsoontay 3-0 lagu garaacay.
Blues oo ganaax laga saaray suuqa iibka ciyaartoyga markii ay jabisay qodobka sharci ee 150, isla markaana ay lasoo saxeexatay 69 ciyaartoy oo da’yar sannado dhawr ah, waxa Frank Lampard uu ku qasbanaaday in uu isku halleeyo ciyaartooyo da’ yar oo uu isagu kasoo dallacsiistay heerarka hoose iyo kuwo uu kasoo ceshaday amaah ay kaga ku maqnaayeen sida Tammy Abraham, Mason Mount iyo Reece James, kuwaas oo garab siiyey ciyaartoygii hore naadiga u joogay.
Laakiin maxkamadda Garsoorka Ciyaaraha oo Chelsea ay rafcaan u qaadatay, ayaa kala-badh ka yaraystay xayiraaddii suuqa laga saaray, waxaanay taasi siisay fursad ay bishii January ee dhoweyd heshiisyo kula soo galaan ciyaartooyo, iyadoo ay 37 Milyan oo Gini kasoo bixiyeen Hakim ZIyech oo Stamford Bridge tegi doona xagaaga.
Sidoo kale, waxa uu Lampard fursad u haystaa inuu suuqa ka doonto laacibiin kale oo tayo sare leh oo ka caawisa in Blues ay xili ciyaareedka dambe ku tartanto Premier League iyo Champions League.
Dhinaca kale, waxa jira ciyaartooyo waqtigoodu dhamaad yahay iyo kuwo ay kooxdu u aragto inay dulsaar ku yihiin oo xagaaga albaabka laga furi doono.
Xiddigahan oo ay tiradoodu tahay shan, waxa Blues ay qaarkood ku sii deyn doontaa heshiis xor ah, kuwo kalena waxay ku iibin doontaa lacag aan badnayn.
1. Olivier Giroud: Waxa uu noqon doonaa ciyaaryahannada bixi doona dhamaadka bisha June, waxaana la rumaysan yahay inay xiisaynayaan kooxo ka dhisan Talyaaniga iyo Ingiriiska, sida Tottenham, kuwaas oo uu heshiis xor ah ugu biiri doono.
2. Michy Batshuayi: 26 jirkan reer Belgium ayaa albaabka laga furi doonaa laakiin ma jirto qiime la ogyahay oo ay hadda kooxdiisu doonayso inay ku iibiso.
3. Pedro: Sannadkii 2015 ayay Chelsea kasoo iibsatay Barcelona, waxaanu kula guuleystay Premier League, FA Cup iyo Europa League waqtigii uu joogay England, laakiin waxa hadda booska ka riixday Callum Hudson-Odoi, Willian iyo Christian Pulisic. Kooxaha la sheegay inay xiisaynayaan wax ka mid ah Barcelona.
4. Ross Barkley: 26 jir ku fiican khadka dhexe oo kubbadahana dhalin kara, laakiin Blues qaab ciyaareedkeeda si fiican ulama qabsanin muddadii uu joogay. Kooxda West Ham ayaa bishii January isku dayday inay la saxeexato, hase yeeshee xagaaga ayaa la filayaa inuu ka baxo Stamford Bridge.
5. Marco Alonso: 29 jirka reer Spain waxa uu waqti fiican oo afar sannadood ah ku qaatay kooxda reer London, balse tababare Frank Lampard ayaa u arkaya in la gaadhay waqtigii booska uu bannayn lahaa ee lagu soo beddeli lahaa ciyaartoy difaac ahaan ka wanaagsan oo da’diisuna yar tahay.